Mbola sahirana amin’ny fifamindram-pahefana moa izy ireo kanefa dia miankina aminy ny fahafantarana raha efa ao na tsia ilay 40 miliara ariary natokan’ny fitondram-panjakana hikarakarana ny fifidianana. Efa nihaona tamin’ny HCC sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena izahay, hoy izy. Azo lazaina efa tomombana ny ankoatr’izay, rehetra, hoy hatrany ity tompon’andraikitra eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana izay nitarika ny fihaonana tamin’ny mpanao politika tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina omaly ity. Raha ny voalazan’ny lalàmpanorenana moa dia tokony ho 90 andro mialoha ny fifidianana, izany hoe 3 volana no mandeha ny fiantsoana mpifidy. Tsy mbola olana io hatreto, raha toa ka amin’ny oktobra ny fifidianana. Raha izay voalaza izay izany dia azo antoka fa tsy maintsy hanamorona ny fotoam-pahavaratra sy ny fidiran’ny mpianatra ihany ny fifidianana filoham-pirenena. Hilamin-tsaina ve ny mpifidy amin’izay fotoana izay ?